निलो लेस एगेट सिलिका - भिडियोको क्रिप्टो क्रिस्टलीय विविधता हो
निलो फीता agate
ट्याग agate, ब्लू
निलो लेस एगेट अर्थ र फाइदाहरूका गुणहरू
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक निलो लेस एगेट किन्नुहोस्
निलो लेस एगेटे क्रिस्टल एक किसिम हो जुन लेस-जस्तो बान्की प्रदर्शित गर्दछ जस्तै आँखा, घुमाउरो, ब्यान्ड वा zigzags, यदि यी प्रबल भने, यसलाई जाली agate भनिन्छ। मेक्सिकोमा फेला परेको पागल लेस एगेट अक्सर चमकदार र colored्गको र जटिल ढाँचायुक्त हुन्छ। यो एगेट अफ्रिकामा फेला पर्‍यो र विशेष गरी कडा छ।
Polyhedroid एगेट उमेर हो जुन एक पालीड्रोन जस्तै एक फ्लैट-पक्षीय आकार मा ठूलो भएको छ। जब कटाईयो, यसले अक्सर एकाग्र बहुभुज को एक विशेषता layering देखाउँछ। Polyhedroid युग मात्र प्याराबाबा राज्य, ब्राजीलमा भेट्न सकिन्छ। यो सुझाव गरिएको छ कि विकास क्रिस्ट्याल्गोग्राफिक रूप देखि नियन्त्रित छैन तर यो पहिले देखि नै मौजूदा क्रिस्टल को बीच भरने रिक्त स्थानहरु को कारण हो जो देखि भंग भएको छ।
होली निलो एगेट समावेश गर्नुहोस्, साथै होली निलो एगेट पनि लेख्नुहोस्, दुर्लभ गाढा निलो रिबन एगेट मात्र होली, ओरेगन, लेक सुपेरियर एगेट, कार्नेलियन एगेट नजिकै पाइन्छ, रातो रंगको रंग छ, बोत्सवाना एगेट, प्लम एगेट, कन्डोर एगेट, ट्यूब एगेट, दृश्य प्रवाहको साथ च्यानलहरू वा पिनहोल आकारको ट्यूबहरू, फोर्टिफिकेसन एगेट, विस्फोटक सांकेतिक ब्यान्डिंगको साथ पुराना किल्लाहरू, बिन्हामाइट, वरपरको मोन्टानामा पाइने प्रजाति, फायर एगेट, आन्तरिक फ्ल्यास वा आगो देखाउँदा, स्पष्ट एग्रेटको तहको नतिजाको विपरित कन्ट्रन्ट्रिक ब्यान्डि bandको साथ। हाइड्रोथर्मल जम्मा हेमेटिटको एक तहमा र प्याक्सुसेन्ट नदी ढु stone्गा, एगेटको रातो र पहेंलो रूप मैरिल्याण्डमा मात्र पाइन्छ, जहाँ यो राज्य रत्न हो।
अगाटे सिलिकाको क्रिप्टो क्रिस्टल प्रजाति हो, मुख्य रूपमा चेलेस्डनी, यसको धान्यको उत्तमता र रंगको चमकबाट चिनिन्छ। यद्यपि एगेट्स विभिन्न प्रकारका चट्टानहरूमा फेला पर्न सक्दछ, तिनीहरू शास्त्रीय रूपमा ज्वालामुखी चट्टानहरूसँग सम्बन्धित छन् र केही मेटामोर्फिक चट्टानहरूमा सामान्य हुन सक्छ।
अगस्ट, मेहनतका कारण सबै भन्दा सामान्य चीजहरू हो जुन यसका आधारभूत संरचनामा आधारित छ, र प्राचीन पुरातत्वमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि, क्रेटेमा नियोसोस साइटमा पुरातात्विक रिकभरी यसको भूमिका चित्रण गर्दछ। कांस युग मिनोन संस्कृतिमा।
ढु stone्गा तनाव राहत संग सम्बन्धित छ। यो एक ओभरएक्टिक दिमाग र शान्तिकरण तंत्रिका सुखदायकका लागि क्रिस्टल हो। क्षितिजतिर फैलिएको फिक्का निलो आकाशमा हेरीरहेको प्रभाव जस्तै, ढु ,्गा शान्त र शान्त रहनको लागि उत्तम उपकरण हो। एक धेरै आवश्यक दैनिक को लागी यस रत्न मा कल गर्नुहोस् सकारात्मक भाइबस, हाम्रो व्यस्त जीवन को तनाव को लागी उत्तम औषधि।
नीलो बेल हकीक
निलो फीता एगेट केको लागि राम्रो हो?
यो ढु stone्गा एक महान पोषण र सहायक ढु stone्गा हो, क्रोध, संक्रमण, सूजन र ज्वरोलाई बेवास्ता गर्ने। यसले हड्डी, थाइरोइडको कमी, घाँटी र लिम्फ संक्रमणको मर्मतलाई मद्दत गर्न र तिव्र बनाउन मद्दत गर्दछ।
कुन चक्र ब्लू फीता एगेटसँग सम्बन्धित छ?
यस रत्नलाई मुख्यतया घाँटी चक्र क्रिस्टलको रूपमा लिइन्छ, यसले हाम्रो हृदयबाट चक्रहरू मुकुटको माध्यमबाट दैवी, अन्य, र आफैंबाट प्राप्त गर्न, र डर, क्रोध, चिन्ता, र कटुताको भावनालाई प्रतिस्थापन गर्दछ। खुशीको भावना, र आशावादी संग।
के निलो एगेट निलो लेस एगेट जस्तै छ?
तिनीहरू microcrystalline क्वार्ट्ज परिवारसँग सम्बन्धित बैन्डेड चलसेडोनीको समान प्रकारको एक्सचेन्ज योग्य नामहरू हुन्।
के निलो लेस एगेट दुर्लभ छ?
यो दुर्लभ प्रकारको एगेट र हो, क्रिस्टलको एकदम गहन विविधता हो। उच्च गुणस्तरका रत्नहरू नामिबिया र दक्षिण अफ्रिकाबाट मात्र आउँदछन्, रोमानियामा थोरै थप जम्मा भएको साथ।
के तपाईं निलो लेस एगेटको साथ सुत्न सक्नुहुन्छ?
ढुone्गा निको पार्ने व्यवसायीहरू विश्वास गर्छन् कि यो ढु stone्गा प्रोत्साहन र सकारात्मक उर्जाको प्रवाह लाई बढावा दिन्छ। यसलाई निद्राको ढु stones्गा संग्रहमा थपेमा, शान्त दिमागले लाभ उठाउन सक्छ।
तपाइँ निलो लेस एगेट कहाँ राख्नुहुन्छ?
राम्रो स्वास्थ्यको लागि यसलाई तपाईंको घरको पूर्वपट्टि राख्नुहोस्, र सम्पत्ति र प्रशस्तताको लागि दक्षिणपूर्वी भागमा राख्नुहोस्। प्रेम र विवाहमा भाग्यको लागि यसलाई दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा राख्नुहोस्।
तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि निलो लेस एगेट वास्तविक छ वा छैन?
ढुंगाको भित्री भागमा मोमी वा गिलास बनावटको लागि महसुस गर्नुहोस्। यदि तपाइँ हतौडा र छेस्कोको साथ आफ्नो नमूना खोल्न सक्नुहुन्छ, वा यदि यो पहिले नै बिग्रिएको छ भने, ढुंगाको भित्र जहाँ र color्गको ब्यान्डहरू छन् त्यहाँ तपाइँको औंलालाई रगनुहोस्। Agate वामी वा गिलास जस्तै महसुस गर्नुपर्छ।
तपाइँ निलो फीता एगेट कसरी सफा गर्नुहुन्छ?
रत्नहरू सफा गर्ने उत्तम तरिका साबुन पानी र सफ्ट कपडाको प्रयोग गरेर हो। साबुन अवशेष हटाउन राम्रो कुल्ला गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
पहेंलो आँखा agate
ट्याग agate, पहेंलो आँखा
पागल फीता agate
ट्याग agate, पागल फीता, पागल फीता agate
जियोड आविष्कार गर्नुहोस्
ट्याग agate, जिओड
नयाँ रत्नहरू उपलब्ध छन्
हाम्रो पसलको भ्रमण गर्नुहोस्